Ngaba siya kuba ne-Microstation ye-Mac? - Geofumadas
Ngaba siya Microstation for Mac?
Kwiminyaka emibini edlulileyo, u-AutoDesk wasimangalisa ngayo buyela eMac; Nangona akukabikho ingqungquthela epheleleyo kunye nezinye izinto ezisebenzayo zilahlekile, siqonda umkhwa ophawulekayo kwicandelo eliziwa ngexesha elikhethiweyo njengoko ukhetha.
Ukuba uBentley ubuyela kwi-Mac, kuye kwilindelwe ukuba kwiminyaka yamuva ihleli. Ngoku, ukuba ubone ukuba i-Bentley iqalise iBentley Navigator kunye neProjekthiWise ye-Mac malunga nonyaka, ivuselela ukwazi kwakhona xa sibona inguqulelo yedesktop esebenza ngokufanelekileyo kunye ne-manzanita. UGreg Bentley uye wachaphazeleka kakhulu Usuku lokuqala lweMedia Breefing Day, ngubani ocinga ukugcina ezi zicelo ngokusesikweni kwaye usenze sizive ngakumbi xa sibona i-toy yokuqala eqhuba kwi-Android nangona iqhelaniswe ngakumbi kwintsimi yesakhiwo.
Namhlanje, ngumhla we-Keynotes, kungekudala siya kuba noGreg Bentley kunye nomxholo othi "Ukusebenza ngobulumko obuninzi: Ukuguqulwa kokuhamba kolwazi". Siyazi ukuba izicelo zefowuni zingenakuguqulwa, i-geolocation isetyenziselwe phantse yonke into, apho i-geomarketing inxalenye ebalulekileyo kakhulu.
Kodwa andicinge ngoko, ngombono wam asiyi kubona ingqungquthela ye-Microstation ye-Mac. I-Bentley inendlela yeMicrosoft ephawulwe ukuba icinge nge-Apple; kodwa njengoko usuku lusemncinci, siya kukwazi ukuphendula ngokuchanekileyo.
Ukukhawuleza ukulandela isiganeko akunikezeli kwinqaku elibanzi, ngokuqinisekileyo ngobungqina obuninzi kunye nexesha ndiyakwazi ukuwugqiba ngexesha lam elithile.
Post edlulileyo«Edlulileyo Sukuphefumlelwa Ngomhla woLwazi lweNgcaciso
Post Next I-model, ubuyela kwi talenteOkulandelayo "